Mee 3D na iPad anyị | Esi m mac
Mee 3D na iPad anyị
Egburu | | iPad, Noticias, ọtụtụ
Anyị nwere ọtụtụ ngwa n'ihi na, ihe anyị nwere ike na-akpọ, anyị Apple mmebe mbadamba. Anyị ekwesịghị inwe nsogbu mgbe ọ na-abịa layout ọdịnaya, ihe atụ, dezie video ma ọ bụ retouch foto (mgbe niile na-ekwu okwu n'ozuzu ha na-enweghị na-aga n'ime ukwuu nkenke zuru ezu); nke ahụ bụ ịsị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile nke imewe. Mana onwere uzo doro anya nke ayi g’enwe nsogbu ozo, nka gabu 3D. Mgbe m kwuru na mbụ n'isiokwu ndị ọzọ, ngwa Astropad, nke kwere ka ọ rụọ ụdị akwụkwọ ọ bụla, na-emegharị ihuenyo nke Mac anyị na iPad. Mana…
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime “3D” kpọmkwem site na iPad anyị n’enweghị ịdọrọ kọmputa anyị?
Otu n'ime azịza ya dị na App Mee. Ngwa nke na ụbọchị ya, na ngosi nke iPad Pro, Apple gosipụtara anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime ụgbọ mmiri ya, ma nke taa dị ka otu n'ime ndị ukwu echefuru ihe niile.
Ihe ngwa a bu n’obi na anyị chefuru maka sọftụwia CAD dị mgbagwoju anya ka anyị rara onwe anyị nye na ịse ihe. Ekwesịrị m ịsị na anọ m na-anwale ya ihe dị ka ụbọchị 15 ma enwebeghị m mmetụta ntakịrị na ngwa a nwere ike ọ bụla na nso CAD software ọ bụla, yana obere AutoCAD.
Na isiokwu nke 3D bụ nchegbu, fọrọ nke nta ka mma ghara ịbanye. Ngwa nke na-aghọ ihe dị mgbagwoju anya ma dị njọ mgbe anyị malitere iji akụkụ na osisi "bulie". Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ngwa amamịghe ọfụma mgbe ọ na-abịa ịme eserese na echiche ọsọ ọsọ nke 3D aghụghọ iji mesịa rụọ ọrụ na desktọọpụ desktọọpụ nke na-enye anyị ohere iji isi okwu rụọ ọrụ na isiokwu a. N'agbanyeghị na iPad Pro anyị nwere ikike zuru oke iji nye ihe oyiyi dị mfe, ruo taa, anyị enweghị ike ikwu okwu karia ịnye injin ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya. N'ezie, ihe ngosi anyị mere na UMake, anyị nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na ya na ngwanrọ desktọọpụ ọ bụla maka 3DEkele maka ngwanrọ a, ọ na-enye anyị ohere ibupụ na ndọtị dị ka .obj ma ọ bụ .dae.
Dị ka anyị kwurula, Apple na ndị mmepe ka nwere ogologo ụzọ ha ga-aga ma a bịa na ngwa. Anyị ga ahụ ihe na-ewetara anyị iOS 10 na ihe ijuanya ga-ewetara anyị maka anyị bụ ndị chọrọ iji nke anyị iPad Pro, ma obu na nhazi nke omenala, 3D ma obu obuna web ma obu ngwa, ebe obu enwere ụfọdụ asịrị na Apple nwere ike ịgụnye ụdị nke Xcode ozugbo na iPad anyị. Ọ ga-abụ otu nzọụkwụ maka ndị chọrọ ichefu koodu ọdịnala na mmemme ozugbo na ọnọdụ imepụta, nke m na-ewere dị ka ihe siri ike na njedebe na mbido mbụ.
N'ịlaghachi Umake na nkwubi okwu, m ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ma na-enwe ọganihu na ngwa a, nke m nwere olile anya nke ukwuu ma echere m na ọ nwere nnukwu ikike, iji hụ ma otu ụbọchị m ga-arụ ọrụ ọma ma si otú a nwee ike tukwasi ya obi ka obim.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPad » Mee 3D na iPad anyị
Icushion bụ ụzọ kachasị mma iji jiri iPad gị. https://www.amazon.es/sostenedor-almohadilla-amortiguador-dispositivos-escritorio/dp/B00ANITE5Q?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
Apple Watch tụfuru ewu ewu na gam akporo Wear
Ngwaọrụ CareKit nke Apple dị ugbu a